Okubalulekile Ingabe le ndiza abalawuli ehambisanayo?
unyaka 1 10 edlule #504 by JanneAir15
Sawubona! Ngakho nganquma ukuthenga a induku yokudlala, iphini eselishova kanye isigwedlo mpintsha. Ngicela ungitshele kukhona lezi abalawuli ehambisanayo? Futhi uma kungenjalo ke ukutshela iyini inkinga futhi unga- bacebisa into efanayo-ke? Yiqiniso wena angaphakamisa okuthile Kwezinye izilawuli ngisho noma lezi niyafanelana kodwa ulwazi lwakho Ngingathanda ukuba lesi isethi ngaphansi 300 € futhi has uqukethe zonke ezintathu: induku yokudlala, iphini pedals futhi mpintsha isigwedlo.
- Thrustmaster T16000M induku yokudlala
- Logitech Saitek Pro Flight iRudder pedals
- Logitech Saitek Pro Flight mpintsha Quadrant
unyaka 1 10 edlule #505 by Gh0stRider203
Ngiyaqiniseka bafuna uku ahambisanayo, nakuba uma ufuna ngempela ukuhlelwa ezinhle, uthole Saitek X55. Lokho into nje EPIC. NGOKUDABUKISAYO, kungcono aphume intengo yami ibanga (nanoma yini nje iphelelwe intengo yami ibanga njengamanje, ngeshwa ~ uyabubula ~)
unyaka 1 10 edlule #506 by JanneAir15
Kulungile. Kodwa ngicabanga ukuthi sonke ehambisanayo ngoba Ngizofika ukuthenga Logitech Extreme 3D Pro induku yokudlala bese bonke bangabafundi Logitech okuyinto kulula ke futhi maningi ehambisanayo Cishe.
unyaka 1 10 edlule #507 by Gh0stRider203
Ngangivame ukusebenzisa Saitek x45, kodwa UMA benginemali ... Ngingathanda SO uthole X55 ngokuphazima kweso. Uzowathola ngokulambisa ngisho kufanele usebenzise ikhibhodi ngesikhathi indiza ngaphandle mhlawumbe ukukhuluma ATC.
Stick, mpintsha futhi isigwedlo (ku nangaphandle we mpintsha) kanye uzowathola kumele basebenzise i 1 USB port
unyaka 1 10 edlule #510 by JanneAir15
isethaphu Nice kodwa ngithanda ukuthi iphini ilawulwa eselishova ngakho Ngizofika nalezi:
-Logitech Extreme 3D Pro induku yokudlala
Siyabonga ngosizo Nokho!